Maxaad kala socotaa shaashadda sida warqadda oo kale ah? | Salaan Media
Home Articles Maxaad kala socotaa shaashadda sida warqadda oo kale ah?
Maxaad kala socotaa shaashadda sida warqadda oo kale ah?
Tiknoloojiyada AMOLED oo suurta galinaysa in shaashad aad u dhuuban sida warqada oo kale la sameeyo
Shirkada wayn ee Samsung Electronics ayaa ku mashquulsan sidii ay u hormarin lahayd teknoolojiyan layidhaah AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode) markii ay la wareegtay lahaanshaha shirkad loo yaqaan YOUM oo baadhitaan ku samaynaysey tiknoloojiyadan AMOLEDka. Tiknoloojiyadan ayaa suurto galinaysa in markii ugu horeysay la samayn karo shaasha ama iskriin aad u dhuuban oo xitaa isku laabmi kara sida warqada oo kale.
Tiknoolojiyadan ayaa lagu isticmaali karaa telefoonada gacanta iyo telefishanada casriga ah iyo kombayuutarada iyo wixii lamidka ah ba iyada oo ay iskriinadaasi dab ama koronto badan ayna cuni doonin. Shirkada Samsung ayaa dhawaan soo bandhigtay telefoonkeedi Galaxy S4 iyadoo kalinta koowaad ku haysata marka dhinaca iibka loo eego telefoonada loo yaqaan Smartphone ama telefoonada maskaxda badan.
Hadaba ila daawada bandhigan ay shirkada Samsung kusoo bandhigtay carwo elektroonada ah oo loo yaqaan CES (Consumer Electronics Show) oo sanad kasta lagu qabto magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalka Maraykanka oo ay shirkadaha electroonada caalamku ku soo bandhigaan qalabka ama afkaarta cusub ee ay ku soo biirinayaan calamka.
Halkan ka daawo muqaalka: